Herintaona Tamin’ny 21 Aogositra, Notafihan’i Assad Taminà Fitaovam-Piadiana Simika i Al Ghouta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2014 8:34 GMT
Herintaona androany (21 Aogositra), efa ho an'arivony ireo sivily matin'ny entona tany Syria. Tao aminà tanàna kely vita fahirano, mitoetra maily (miles) vitsivitsy miala ny renivohitra, nampiasa entona “sarin” mahafaty tamin'ny vahoakany ihany ny fitondràn'i Assad, namono ankizy miisa 429.
Mety hoe hisy zavatra hiova ihany, rehefa mahazo fanamelohana iraisam-pirenena ny fahafatesany. Mety hoe hisy zavatra hiova ihany, rehefa tsy mila olona maty an'arivony anatin'ny andro iray intsony “vao hiasa saina” ireo mpitantana ny tany. Mety hoe hisy zavatra hiova ihany, rehefa tsy mila tapahan-doha noho ny teniny intsony ireo mpanao gazety vao ho re. Mety hisy zavatra hiova ihany, ho amin'ny tsaratsara kokoa, rehefa midika bebe kokoa noho ny famoriana misimisy ireo mpanao gazety ary tefaka eo amin'ny tànan'ny mpanao didy jadona, ny atao hoe fanamelohana iraisam-pirenena.
Mpandika teny sady mpikaroka i Hiba Dlewati, ary vao nahazo vao tsy ela izay ny maripahaizana tao amin'ny Anjerimanontolon'i Mishigàna, navoaka tao amin'ny gazety Today's Zaman, The Michigan Times, Qua Literary Magazine ary United for a Free Syria, ny asany. Araho ao amin'ny Twitter izy, ao amin'ny @Hiba_Dlewati.